Dhoohiinsa Guddaa Beeyruut keessatti muudateen namoonni heddu madaahuu gabaafame - NuuralHudaa
Dhoohinsa hamaa galgala kana qarqara Buufata Doonii magaalaa Beeyruut keessatti muudateen, hanga ammaatti yoo xiqqaate namoonni kudhan akka du’anii fi kanneen biroo dhibbatti lakkaahaman ammoo madaahuu qondaaltonni biyyattii beeksisan.
Ministeerri fayyaa Lubnaan Hamad Hasan Aljazeeraaf akka himetti, dhoohinsi kun maal akka tahe hanga ammaatti hin beekamne. Haata’u malee dhoohinsa guddaa kanaan buufatnii doonii harki caalu akka barbadaaheefi, gamoowwan fageenya irra jiran hedduunis kan miidhaman tahuus ibsame.
Balaa kana hordofuun hojjattooni lubbuu baraaran helikoptaraa fi maakinootaan deeggaramuun ibidda naannichatti qabate dhaamsuuf kan carraaqaa jiran tahuus odeeyfannoon argame ni addeessa.
Pingback: Dhoohiinsa Guddaa Beeyruut keessatti muudateen namoonni heddu madaahuu gabaafame — NuuralHudaa – Bale baha blog
Ahmad Muhaammadsaanii says:
Am Wr Wb?
Maashaa Allaah, hojii ajaa’ibaa hojjechaa jirtani.App keessanis, TV keessanis akkaan hordofa.Qophiilee gaggaarii qopheessaa jirtan.Qophii namoota bebbeekamoo Addunyaa kanarraa, keessatti biyyoota dhihaa keessatti gara Islaamaatti deebi’an seenaa isaanii itti dhiyeessitanis osoo qabaattanii barnoota gaaritu irraa argama.
September 27, 2021 sa;aa 9:52 pm Update tahe